Nwatakịrị nwanyị A Na-akọ Akụkọ, Margaret Atwood Arụmụka Bestseller | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Nwanyị Nwaanyị Akụkọ
John Ortiz | | akụkọ sayensị emeghị eme, Akwụkwọ, Novela
Nwanyị Nwaanyị Akụkọ bụ akwụkwọ akụkọ onye Kanada bụ Margaret Atwood dere. E bipụtara ya n'oge mgbụsị akwụkwọ nke 1985 na obodo ya ma ọ bụrụla na ọ nwere nnukwu ihe ịga nke ọma, na-ere nde nde ya. Ndị hụrụ dystopias n'anya na-ewere aha a dị ka nke ochie, n'ihi na ọ bụ akụkọ na-adọrọ mmasị nwere ihe omimi dị egwu.
Ọrụ akụkọ a bụ ntụle zuru ụwa ọnụ; kpatara mmetụta dị ukwuu site na isiokwu ya na ụzọ ọjọọ o gosipụtara ịkpa ókè megide ụmụ nwanyị. Ọ bụ n'ihi nke ahụ Emegharịrị ya n'ọtụtụ oge, ma maka ihe nkiri, telivishọn na ihe nkiri; enwere ọbụna ụdị maka opera. Ihe nnọchianya ya n'usoro usoro pụtara ìhè-nke Hulu mepụtara na Elisabeth Moss nke onye na-egwu egwu-, nke oge nke atọ na-agbasa ugbu a.
1 Nwaanyị Nwaanyị (1985)
1.1 General akụkụ nke ọrụ
1.1.1 Ọchịchị na-ekewa ụmụ nwanyị
1.1.2 Nnọchite anya ụmụ nwoke
2 Banyere onye edemede
2.2 Ndụ nkeonwe
2.3 Egwuregwu edemede
2.4 Ọrụ ndị ọzọ
Nwanyị Nwaanyị Akụkọ (1985)
Ọ bụ akwụkwọ akụkọ ọdịnihu na sayensị nke dystopian, buru amụma na afọ 2195. Ọ bụ edoziri na Republic of Gilead, guzobere mgbe ndọrọ ndọrọ ọchịchị megide ọchịchị US. N'ebe ahụ, ọchịchị aka ike siri ike dị ndụ, dabere na Agba Ochie nke Akwụkwọ Nsọ. N'ime ọrụ a gosipụtara ya ihe na-elekọta mmadụ na ịkpa oke ike megide ụmụ nwanyị.
Akụkọ a na-akọ na onye mbụ site Offredonye kọrọ ndụ ya taa na-echeta ihe ndị mere n'oge gara aga tupu ụlọ akwụkwọ Gilead. Ọ, dị ka ndị inyom niile, e kenyere ka ọ rụọ ọrụ a kapịrị ọnụ, na nke ya ọ bụ otu ndị odibo.
NT'SKWU NDID ỌZỌ ...
General akụkụ nke ọrụ
Ọchịchị na-ekewa ụmụ nwanyị
Dị ka ụfọdụ nke ịda mbà na ịchị ụmụ nwanyị, ọchịchị ọhụrụ ahụ kpebiri ikewapụ ha iche dịka ọrụ ha kwesịrị ịdị na ọha mmadụ ahụ. Iji mara ọdịiche dị na ọrụ ndị a, a na-ahụ ụzọ nke isii ọ bụla guzobere site na agba nke uwe ha.
Ndị na-eje ozi —Ihe Mere Ha na-acha uhie uhieỌrụ ya bụ ime ka ụmụ ndị ọchịagha bata ụwa. N'akụkụ aka nke ọzọ, ndị nwunye bụ ụmụ nwanyị sitere n'ọmụma ala na ha na-eyi uwe na-acha anụnụ anụnụ n'oyiyi dika Nwa agbogho Mary. Ha, n'agbanyeghị ibi ndụ dị jụụ ma dị jụụ, Ha na-adabere na ụmụ odibo ahụ iji hụ na ụmụ ha.
Ndị aha ya "Nwanne mama" ha na-ele anya Uwe aja aja, ha na-elekọta ụmụ agbọghọ ahụ ma na-ahụ maka ịhụ na ha rubere isi n'iwu, na-enwe ike ịta ha ahụhụ ma ọ bụrụ na ọ bụghị. E nwekwara ìgwè awọ-akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ọzọ a na-akpọ ndị "marthas", ndị, n'ihi afọ ndụ ha, enweghị ike ịmụ ụmụ; ọrụ ya bụ isi nri na ọcha maka ezinụlọ ndị ọchịagha.
N'ikpeazụ, ha bụ ndị "econowives", ndị na-eji nkeewa akara uwe ha bu ndi nwunye umu ogbenye. Ha ga-eme ihe niile ha nwere ike ime. A na-ahụta ndị ọzọ fọdụrụnụ dị ka "ndị na-abụghị ụmụ nwanyị", ndị, n'ihi ọchịchịrị ha gara aga, na-ata ahụhụ ma kpụga ha n'akụkụ oke ruo mgbe ha nwụrụ.
Nnọchite anya ụmụ nwoke
Ndị ikom ahụ, maka ha, bụ ndị ha na-ewere iwu na ọchịchị aka ike. E depụtara ndị na-agba ọchịchị ahụ dị ka "Ndị ọchịagha", ma gha eyi uwe ojii. Ha bụkwa Ndị mmụọ ozi ", onye je ozi gilead.
Ndị nlekọta ", n'aka nke ya, bụ ndị ndị na-ahụ maka nchekwa nke ndị ọchịagha. N'ikpeazụ, "Anya Chineke" Ndi onye ha na-ele anya ka ndị na-ekweghị ekwe iji nọgide na-ekpebisi ike iji.
Na oge ọdịnihu, ogbugbu nke n'ezie Onye isi ala United States kpalitere ọchịchị. E guzobere ọchịchị aka ike, aha obodo ahu bu nke "Republic nke Gilead". N'oge ahụ, ọnụ ọgụgụ ọmụmụ nke ụmụ nwanyị dara ngwa ngwa, n'ihi mmebi nke mmetọ. Nke a mere ka ikike ụmụ nwanyị gbanwee nke ọma.
Agbaghara bụ nwagbọghọ ibi ndu ka odibo Fred Fredford na nwunye ya Serena Joy, bụ onye na-eme isi ike. Ella, dị ka ọrụ ya si kwuo, dị n'ime ezinụlọ iji weta ụwa maka di na nwunye mbụ. Mgbe ọtụtụ mbọ mechara turu ime, Offred gara ụlọ ọgwụ. N’ebe ahụ ka ọ matara na ihe kpatara nsogbu ahụ bụ Fred.
N'ihi ọnọdụ ahụ, dọkịta na-agwọ ọrịa na-eme ka a ghara ịgwa Offred ihe siri ike, nke ọ nabataghị. Na consecuense, Serena n'onwe ya na-amanye ya ka ya na onye nlekọta ezinụlọ ahụ nwee mmekọrịta, niile iji nweta nwa nwoke ahụ m chọrọ nke ukwuu. Mmekọrịta a na-enwe ọganihu ma na-eme ka ndụ Offred na ọchịagha sie ike karị. Ọtụtụ ihe ga-eme ruo mgbe ihe niile nwere ike ịlaghachi na nkịtị.
Onye na-ede uri na onye edemede Margaret Atwood hụrụ nke mbụ na Ottawa, Canada, na Satọdee, November 18, 1939. Ọ bụ ada nke ọkà n'ihe gbasara anụmanụ Carl Edmund Atwood na onye na-eri nri Margaret Dorothy William. Ọtụtụ n'ime nwata ya nọrọ n'agbata ugwu Quebec, Ottawa, na Toronto, bụ nke ọrụ nna ya na-arụ dị ka ọkà mmụta ihe banyere ọhịa.
Dị ka nwatakịrị, Margaret ọ na-amasịkarị ịgụ ihe; ya onwe ya ekwupụtala n'ọtụtụ oge agụwo ụdị edemede edemede niile. Ọ nwere ike ịnụ ụtọ akwụkwọ akụkọ omimi, ihe ọchị, akụkọ sayensị, yana akwụkwọ akụkọ banyere akụkọ Canada. Mee elu mee ala, onye ọ bụla n’ime ha baara ya uru nke ukwuu n’ọzụzụ ya dị ka onye edemede.
Ọ gụsịrị akwụkwọ sekọndrị na Leaside High School na Toronto. Na 1957, ọ banyere Victoria University; Ebe ahụ, afọ ise mgbe e mesịrị, nwetara BA na English Philology, na-enwekwu ọmụmụ na French na Nkà Ihe Ọmụma. N'afọ ahụ, ọ banyere Mahadum Harvard University nke Raddiffe maka nzere postgraduate site na Woodrow Wilson Research Fellowship..
Onye edemede alụọla di na nwunye abụọ, nke mbụ na 1968 na Jim Polk, onye ọ gbara alụkwaghịm 5 afọ mgbe e mesịrị. Oge mgbe, lụọ di na ode akwukwo Graeme Gibson. Na 1976, n'ihi njikọ a, ha nwere nwa nwanyị, ha mere baptizim dị ka: Eleanor Jess Atwood Gibson. Site n'oge ahụ ruo ugbu a ezinụlọ ahụ bi n'etiti Toronto na Pelee Island, Ontario.
Atwood malitere ide ihe mgbe ọ dị naanị afọ iri na isii. O nweghi oke nwoke na nwanyi nke e ji mara gị; ewebatawo akwụkwọ ọgụgụ, edemede, edemede na ọbụna edemede maka telivishọn. N'otu aka ahụ, ọtụtụ ndị na-agụ nwanyị na-ele ya anya, n'ihi na ụfọdụ ọrụ ya kachasị eme ihe dabere na isiokwu ahụ.
N'otu aka ahụ, Ọ rụọla ọrụ na isiokwu dị iche iche metụtara obodo ya, dị ka: njirimara Canada, moors ya na gburugburu ya. N'otu aka ahụ, ọ dere banyere mmekọrịta nke mba na mba ndị ọzọ. Enwere ike ịgụta ha n'etiti ọrụ ya: akwụkwọ 18, akwụkwọ abụ 20, edemede iri na obere akụkọ, akwụkwọ ụmụaka 10 na edemede dị iche iche, librettos, eBooks na akwukwo okwu.
Onye ode akwukwo akwukwo, na mgbakwunye na akwukwo, etinyewo onwe ya na oru ndi ozo, nke oru ya dika prọfesọ mahadum putara ihe. Atwood kuziiri na ulo akwukwo ama ama na Canada na United States. Enwere ike ịkpọ ha: Mahadum nke British Columbia (1965), Mahadum New York na Mahadum nke Alberta (1969-1979).
N'otu aka ahụ, Literata bu onye ndoro ndoro ochichi Canada. Na nke a, alụọ ọgụ maka iche iche ihe, dị ka: oke ruru mmadu, nnwere onwe ikwu okwu na ihe na-akpata gburugburu ebe obibi. Arụla ọrụ a siri ike ma na mba ya ma mba ụwa.
Ka ọ dị ugbu a, ọ bụ nke Amnesty International (ahụ mmadụ na-ahụ maka ihe ruuru mmadụ) ma bụrụkwa akụkụ bụ isi nke BirdLife International (nchebe nke nnụnụ).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Novela » Nwanyị Nwaanyị Akụkọ
Ọchịchịrị na chi ọbụbọ
Arturo Sánchez Sanz. Ajụjụ ọnụ nke onye edemede nke Belisarius: Magister militum nke Eastern Roman Empire